Shiinaha kaabsal qaybta Factory, qayb kaabsal qeybiyaha
YWJ Taxanaha Mashiinka Xinjirta Gelatin jilicsan
Isku-dhafka tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay ee caalamiga ah ee lagu xirayo qibradeena gelatin, YWJ mashiinka encapsulation gelatin jilicsan oo si buuxda otomaatig ah ayaa ah jiil cusub oo mashiinka dhulalka gelatin jilicsan leh oo leh wax soo saar aad u ballaaran (kan ugu weyn adduunka).
NJP Taxanaha Mashiinka Buuxinta Kaabsoolka
NJP Series mashiinka buuxinta kaabsalka tooska ah wuxuu qirayaa hawlgalka wareega ee kala wareega, nooca saxanka rif1ce ee qiyaasta daawada buuxiya, qaab sax ah oo iswaafajsan, orod xasiloon oo lagu kalsoonaan karo. Waxay si otomaatig ah u dhammaystiri kartaa beero, kala-saarid, buuxin, diidis, kaabsal Ick iyo alaab dhammaysatay oo la dhoofiyo iyo habab kala duwan Oo si buuxda uxiran toban － saldhig u wareeg ah, moduleka waxaa loogu talagalay hal saf oo 9 godad ah. Waa qalab caqli-gal ah oo loogu talagalay soo-saaridda kaabsoosha adag ee dawooyinka iyo cunnada,
NJP-260 Mashiinka Buuxinta Kaabsal Liquid
Farmashiyaha, daawada, iyo kiimikooyinka (budada, Baaytarka, granule, kaniiniga), sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu buuxiyo fiitamiin, cunnada iyo dawada xoolaha, iwm.
Mashiinka Buuxinta Kaabsalka CGN-208D
Waxay ku habboon tahay buuxinta budada iyo walxaha granular ee farmashiyaha iyo warshadaha cuntada caafimaadka.
Hemp Cbd Alaabada Daryeelka Caafimaadka
Kaabsulka waxaa badanaa loo isticmaalaa warshadaha sida dawooyinka iyo alaabada daryeelka caafimaadka. In warshadaha CBD, kaabsulka sidoo kale waa lagu dabaqi karaa.
JFP-110A Taxanaha Vertical Capsule Polisher
Mashiinka 'JFP-110A polisher kaabsal leh shaqada sorter sidoo kale. Waxay u shaqeysaa hawsha kaliya ma ahan nadiifinta kiniinka iyo kiniinka laakiin baabi'inta korantada ma guurtada ah. Waxay sidoo kale si otomaatig ah u diidi kartaa kaabsolka culeyska yar; gabal dabacsan iyo jajab kaabsal ah.
LFP-150A Taxanaha Mashiinka Mashiinka Kaabsoolka
Mashiinka nadiifinta taxanaha 'LFP-150A' ee kaabsalku wuxuu leeyahay shaqooyinka labada ah ee kaabsalka xoqidda iyo qaadista. Albaabka mashiinku wuxuu ku xirnaan karaa nooc kasta oo mashiinka buuxinta kaabsalka ah. Meesha laga baxo ayaa lagu xiri karaa aaladda kala soocida kaabsoolka iyo mashiinka baarista birta. Xaqiiji habka wax soo saarka joogtada ah ee nadiifinta, qaadista, kala soocida iyo baaritaanka. Mashiinka ayaa qaatay tiro tiknoolajiyad cusub ah iyo fikradaha naqshadeynta aadanaha.
NSF-800 otomaatig adag (Liquid) Kaabsal dheecaanka iyo Mashiinka Daboolka
Qalabka wax lagu duubo ee kaabsoolka ah ee madax banaan ee ay soo saarto shirkadeena waa qalab asal ah oo dawooyin leh oo leh heer sare oo isdhexgal nidaam ah, kaas oo buuxiya farqiga tiknoolajiyadda adag ee kaabsalka ah ee warshadaha dawooyinka gudaha, iyo habka ku dhajinta ee nabdoon ayaa ka gudbaya xaddidaadaha Hard tiknoolajiyadda kaabsoosha kaabsal ee Yurub iyo Ameerika. Waxay dhameystiri kartaa kaabsoolka adag iyo dareeraha buuxinta ee xabagta adag ee daaweynta daboolida xabagta, sidaa darteed daawada gudaha ee baakadaha, keydinta, gaadiidka, suuq geynta iyo habka dalabka marwalba waxay kujiraan xaalad xiran, si loo wanaajiyo xasiloonida kaabsulka iyo daroogada.
Cilmi-baarista guuleysatay iyo horumarinta kaabsoolaha adag ayaa si buuxda u xallisay dhibaatada farsamada ee muddada dheer jirtay ee dareeraha kaabsal dareere ah, isla mar ahaantaana, waxay sidoo kale si weyn u buuxineysaa shuruudaha sare ee shirkadaha dawooyinka ee xiritaanka, hubinta tayada iyo ka-hortagga been-abuurka dhexdhexaadka ah iyo diyaargarowga kaabsalka adag ee dhamaadka-sare ah.